8 215 ny tranga hita : 575 ny mararin’ny kitrotro niditra hopitaly - ewa.mg
8 215 ny tranga hita : 575 ny mararin’ny kitrotro niditra hopitaly
News - Santé - 8 215 ny tranga hita : 575 ny mararin’ny kitrotro niditra hopitaly
Nanomboka ny volana septambra lasa teo no niseho ny trangana aretina kitrotro teto amintsika. Ny volana oktobra vao nitombo tsikelikely ny tranga voatily ary nahatratra 250 na mihoatra izany. Ho an’ny volana novambra, nahatratra 400 mahery ny tranga, araka ny antontanisa avy any amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. 19 ny hopitaly mandray ny mararin’ny kitrotro ka mila fitsaboana manokana noho ny fahasarotana. 575 ny isan’ny nanaraka fitsaboana hatramin’izao ka ao amin’ny hopitaly Befeletanana (Antananarivo) ny 206 amin’izy ireo. Ny zaza herintaona ka hatramin’ny 14 taona ny maro an’isa amin’ireo voan’ny aretina kitrotro. Voakasika ny distrikan’Arivonimamo, Ambatondrazaka, Tsironoamandidy, Amparafaravola…
Anisan’ny voalaza fa nampirongatra ny aretina kitrotro tamin’ity taona ity ny fahalainan’ny reny nampanao vaksiny miaro amin’ny kitrotro ny zanany feno 9 volana. Marefo izy ireny ka mora ifindran’ny aretina kitrotro. Ny fahataran’ny fanatonana mpitsabo no mampitombo ny fahasarotana amin’ny fitsaboana. 8 215 ny tranga voatily amin’ny distrika 38 tao anatin’ny efa-bolana.
L’article 8 215 ny tranga hita : 575 ny mararin’ny kitrotro niditra hopitaly a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 10/12/2018
Fahasalamana - Kitrotro
Fampiharana ny fanenjanana fepetra…: olona 169 tratra tsy nanao arovava, taxi-be 78 nosavain’ny polisy
Vao mainka nihamafy ny fampiharana ny fanenjehana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny codiv-19. Ny faran’ny herinandro teo efa nisy ny hetsika nataon’ny polisim-pirenena amin’ny fanentanana ny olona amin’ny hanarahana hatrany ny fepetra, indrindra fa ny fitangorongoronana anaty trano, toy ny trano fandihizana, ny bar, ny karaoke. Nitohy, omaly indray izay hetsika nataon’ny polisy izay tamin’ny fampiharana ny sazy ho an’ireo minia sy/na manao beloha tsy manaraka ny fepetra. Nanomboka omaly maraina hatramin’ny 12 ora antoandro, miisa 169 ireo olona tratra tsy nanao arovava orona ka nampanaovina asa iombonana mba ho tombontsoan’ny besinimaro. Nambaran’ny polisy fa tany amin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano no tena betsaka tsy nanara-dalàna. Miisa 63 kosa ho an’ireo tratra tsy nanao izany ho an’Antananarivo Renivohitra toy ny teny Analamahitsy. Miisa 78 kosa ireo taxi-be nandalo fisavan’ny polisy.Jean ClaudeL’article Fampiharana ny fanenjanana fepetra…: olona 169 tratra tsy nanao arovava, taxi-be 78 nosavain’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Trafikana zavamahadomelina mahery vaika: 11 nidoboka am-ponja, anisan’izany ireo teratany afrikanina 5 lahy
Niakatra teo anatrehan’ny fampanoavana ny talata hariva teo ary nitohy mandrak’alina ny fakana am-bavany ireo voarohirohy tamin’ilay raharaha fiparitahana zava-mahadomelina mahery vaika. 11 tamin’ireo 19 voasambotry ny polisy no naiditra am-ponja vonjimaika. Anisan’izany ireo teratany afrikanina dimy lahy.Olona miisa 11 nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora, taorian’ny niakaran’ny raharaha teny amin’ny fampanoavana, ny talata teo. Isan’ireo mifonja vonjimaika amin’izany ireo teratany afrikanina voarohirohy tao anatin’ny raharaha. Manampy izany koa ireo teratany malagasy maromaro voalaza ho mpanaparitaka ireo rongony mahery vaika eto an-drenivohitra. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo vehivavy miisa efatra, izay nahitana mpivarotena, mpianatra, mpiasa an-trano. Taorian’ny fihainoana azy teny amin’ny tribonaly etsy Anosy, lehilahy miisa roa tamin’ireo voasambotra ihany koa no nahazo fahafahana vonjimaika.Tsiahivina fa nahatratra 19 ireo voasambotry ny polisy tao anatin’io raharaha fanapariahana rongony mahery vaika io. Isan’izany i Pex, malaza amin’ny fanapariahana sy fivarotana rongony mahery vaika toy ny Skunk, heroine, cocaine; amphetamine ary extasy amina sekoly eto an-drenivohitra.Nitohy ny fanadihadiana ny raharaha, nisesisesy ny fisamborana ireo olona mpandray anjara mivantana, izay nahatrarana ireo teratany afrikanina miisa dimy, tetsy Andohan’Analakely ny roa raha voasambotra teny 67ha kosa ny telo hafa. Ireto farany izay mbola nahatrarana zava-mahadomelina. Izy ireo indray izany no manaparitaka ireo rongony any amin’ireo teratany malagasy mivarotra sy mandray izany. Vokany, teratany malagasy miisa 14 no voasambotra. Tao anatin’ny efatra andro monja no nanenjehana ireo mpidoroka rongony teny Ivandry, Androhibe, Amboanjobe, Isoraka, Ampitatafika, Antsahamamy, Analamahitsy sy 67 ha.Henintsoa HaniL’article Trafikana zavamahadomelina mahery vaika: 11 nidoboka am-ponja, anisan’izany ireo teratany afrikanina 5 lahy a été récupéré chez Newsmada.
ALAOTRA MANGORO :: Hamerina ny tany ao Vohidiala amin’ny vahoaka i Andry Rajoelina
Tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro no nanohizan’ny kandidà laharana faha-13 Rajoelina Andry ny fampielezan-keviny, omaly. Nanomboka tao amin’ny kianja maitson’Ambohijanahary, tao Didy, izany ary nipaka hatrany Ambatondrazaka, renivohitry ny Faritra. Nisongadina hatrany ny fanaovan’ny kandidà laharana faha-13 velirano amin’ireo vahoaka maro mihaona aminy. Ho an’ireo mponina ao Ambatondrazaka, dia nohama­fisiny fa « atao laharam-pahamehana ny fanamboaran-dalana sy ny fiahiana ny fandriampahalemana ». Efa tamin’ny fiafaran’ny tetezamita no voaomana sy teo am-pelan-tanany ny antontan-taratasy amin’ny fifanarahana mikasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 mampitohy an’i Moramanga sy Ambatondrazaka. « Vao tonga eo amin’ny fitondrana aho dia hatomboka ny asa », hoy i Andry Rajoelina. Tao Didy, distrikan’Ambatondrazaka kosa no namelabelarany ny fanatanterahana an’ireo tetikasa maro lafy ho fampiroboro­boana ny fambolena. Hisy, ohatra, ny fanamboarana ny toho-drano ao Ranomena, izay antoka hahafahan’ireo tantsaha manabe voho ny sehatry ny fambolena. «Maro ny filoha fa Andry Rajoelina ihany no manao velirano aminareo vahoaka. Izaho tsy hamadika anareo», hoy izy. Ankoatra izay, nanome toky an’ireo mponina ao Didy ny hanome fitaovana hanamboarana hôpitaly manara-penitra sy fametrahana hery vonjy taitra hifarimbonan’ireo mpitandro filaminana hiadiana amin’ny asan-dahalo ny kandidà laharana faha-13. Nanome toromarika an’ireo mponina ao Didy mba hanara-maso akaiky ny fizotran’ny latsa-bato sy ny fanisam-bato mandritra ny andron’ny fifidianana indrindra koa ny tenany. «Mila mailo isika rehetra rehefa mandeha ny fifidianana. Tsy avelantsika hisy hanodinkodina intsony ny safidintsika. Jereo tsara ny taratasy firaketana ny voka-pifidianana (PV) , mitovy ve ny isan’ny vato eo amin’ny tabilao sy ny eny amin’ny PV. Ny ampitson’ny fifidianana dia handefa hélicoptère aty aho haka ny vokatra», hoy hatrany izy. Hiaro ny vahoaka Tao amin’ny kaominin’i Manakambahiny Atsinanana, Faritra Alaotra Mangoro indray dia nasongadiny ny efa fahavononany hiatrika ny latsa-bato, amin’ny 19 desambra ho avy izao. Nambarany tamin’ireo mponina tao Manakambahiny fa “hiaro ny vahoaka malagasy no antony nirotsahany ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena”. “Nisy nangalatra, nisy nanao barofo ny taninareo tao Vohidiala. Haveriko aminareo io tany io rehefa lany aho. Izaho tsy hiady ho an’ny tombontsoako fa hiady hoan’ny vahoaka”, hoy izy. Nanome toromarika izy hoe: “Reseo lahatra ny fianakaviana sy izay misalasala. Ireo tsy mbola nahazo kara-pifidianana dia mankanesa any amin’ny fokontany maka karatra”. Isan’ireo nanotrona ny kandidà Rajoelina Andry tao Morarano Kraoma, ny dokotera Robinson Jean Louis sy ireo Ben’ny tanàna miisa telo ambin’ny folo avy amin’ny distrikan’ Amparafaravola. Teo am-pamaranana ny kabariny no nanambaran’i Andry Rajoelina fa manaja an’ireo zoky raiamandreny nitondra ny firenena teo aloha ny tenany. Notsindriany fa ireo zavatra tsy vitan’izy ireo teo aloha dia “aleo hataon’ny tanora” toa azy. L’article ALAOTRA MANGORO :: Hamerina ny tany ao Vohidiala amin’ny vahoaka i Andry Rajoelina est apparu en premier sur AoRaha.
Toamasina : 15 minitra monja ny afomanga
Fimenomenomana ny an’ireo fianakaviana nitondra an-janany nijery afomanga izay napoaka teny amoron-dranomasina ny talata 25 jona hariva teo, satria tsy nisy afa-tsy 15mn monja ny afomanga anjaran’i Toamasina tamin’ity taona ity, raha nahatratra adiny iray izany teo aloha sy hatramin’izay. Maro tamin’ireo fianakaviana no raikitra tao anatin’ny fitohanan-dalana lava be teto Toamasina ny harivan’ny talata, ka raha tonga teny amoron-dranomasina hijery afomanga dia efa tapitra izany. Taorian’ny afomanga dia natomboka avy hatrany ny « bal populaire » izay efa fanao isan-taona eto Toamasina, ka ireo mpanankanto avy eto Toamasina zokiny sy ireo tanora ihany no nanafana izany, teny amoron-dranomasina ihany no nanaovana azy. Raha maina ny fanapoahana ny afomanga ny talata dia orana kosa no nitsena iray mpanao matso teto Toamasina omaly, ka nandritra ny fandraisana anjaran’ireo mpianatra sy ny fikambanana samihafa ary ireo antoko politika isan-karazany no tena niseho izany orana izany. Niisa 232 ireo andian-tafika sy ireo mpitandro ny filaminana nandray anjara tamin’ny matso, izay nahitana ny tafika, ny zandary, ny polisy, ary ireo mpandraharaha ny fonja. Nahatratra 3080 kosa ireo mpianatra nandray anjara avy amin’ny sekoly miisa 77 teto Toamasina, nisy fihenana betsaka tamin’ity taona ity ny fandraisan’anjaran’izy ireo satria nahena ho mpianatra 40 isaky ny sekoly ny afaka mandray anjara tamin’izany. Ankoatra izany dia mbola nampiseho ny fisiany sy ny fandraisany andraikitra eo amin’ny firenena ihany koa ireo antoko politika matanjaka eto amintsika sy eto Toamasina nandritra ny matso omaly. Isan’ny nandray anjara tamin’izany ny Tanora Gasy Vonona (TGV) sy ireo mpiara-dia aminy ao anaty fikambanana samihafa, ny Tiako I Madagasikara (TIM), ny Fikambanana Malagasy Mandroso (FIMAMI, ny GASY Mivoatra (GasyMi), ny Malagasy Tonga Saina (MTS),…ary ny Gasikara Antsika Rehetra (GAR). Malala DidierL’article Toamasina : 15 minitra monja ny afomanga a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Opposition : Rendez-vous le 06 mars à Soamandrakizay
L’opposition insiste et accepte finalement l’option dans le quartier d’Androhibe pour organiser un rapport public avec les parlementaires du parti Tiako i Madagasikara élus à Antananarivo. Le député Fidèle Razara Piera, a annoncé, hier sur les ondes de « Miara-manonja », que ses collègues parlementaires comptent tenir une manifestation dans le quartier d’Androhibe, sur une propriété d’un richissime homme d’affaires « karana », près de celle de l’église catholique. Refus. Ce terrain a été déjà proposé à l’opposition par l’État, le samedi 20 février dernier, comme une alternative à la place du 13 mai et Ambohijatovo. Après un refus catégorique la semaine dernière, l’opposition accepte finalement. Pourtant, la préfecture de police reste, à son tour, réticente sur une nouvelle réquisition des lieux au profit de cette manifestation organisée par les députés de l’opposition. La réunion de l’organisme mixte de conception (OMC), de ce mardi, tranchera sur la question. 48 heures. Elle veut tenir une manifestation à Ambohijatovo et sollicite l’Etat de lui accorder l’accès. La plateforme RMDM a entamé une démarche auprès de la préfecture de police pour tenir une manifestation aujourd’hui sur la « place de la démocratie ». Une demande vite rejetée par cette dernière qui refuse d’autoriser les opposants à accéder sur le site. « La demande en question, qui nous est parvenue, n’a pas respecté le délai légal de 48 heures exigé par les textes en vigueur », a affirmé Angelo Ravelonarivo qui justifie le rejet immédiat de la démarche de l’opposition. Parc. Les opposants ne peuvent pas alors tenir la manifestation, d’après les autorités, car « il s’agit d’une question d’ordre public », selon le préfet de police, Angelo Ravelonarivo. Ce rassemblement « ne peut pas avoir lieu », a-t-il soutenu. En tout cas, selon ce dernier, la commune urbaine d’Antananarivo a déjà annoncé que « le site d’Ambohijatovo n’ouvrira pas ses portes pour des évènements, notamment politiques, en raison du projet de construction d’un parc botanique sur ce lieu », selon toujours Angelo Ravelonarivo. Arrestation. Les forces de l’ordre, quant à elles, ont déjà montré leurs griffes. Et le gouvernement affiche la fermeté sur la question. Selon le secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie, Richard Ravalomanana, « les forces de l’ordre vont prendre des mesures pour ceux qui s’obstinent à manifester » aujourd’hui à Ambohijatovo. En effet, compte tenu du refus formel du préfet de police, selon le général de la gendarmerie, le signataire de cette lettre adressée à la préfecture de police sera pris comme « premier responsable si jamais un attroupement a lieu à Ambohijatovo ce samedi ». Cette personne encourt l’arrestation. Et les autres manifestants pourraient également être interpellés. Rija R. L’article Opposition : Rendez-vous le 06 mars à Soamandrakizay est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Opposition : Rendez-vous le 06 mars à Soamandrakizay a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Cisco Antananarivo Renivohitra: sekoly 117 nandrarahana fanafody
Nofendrahina fanafody, ny faran’ny herinandro teo, ny sekoly 117 ao amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra, niarahan’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena sy ny sampandraharaha misahana ny Rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana, ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Natao ny hetsika ho fanohizana ny ady hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus eny anivon’ny sekoly sy hiarovana ireo zaza malagasy sy ireo mpanabe, araka ny voalazan’ny tale jeneraly miandraikitra ny toeram-pianarana, Ralainirina Razokiny Eric, nandritra famendrahana notanterahina tao amin’ny EPP Anosibe.Fanamby apetraky ny minisitera ny fanabeazana ieren-doza ho an’ny mpianatra sy ny mpampianatra manerana an’i Madagasikara. Santatra ny hetsika eto an-dRenivohitra fa mbola hitohy manerana ny faritra 22 ny famendrahana fanafody ireo sekoly rehetra.Efa misy ny tranga niseho teny anivon’ny sekoly fa tsy maro.Vonjy L’article Cisco Antananarivo Renivohitra: sekoly 117 nandrarahana fanafody a été récupéré chez Newsmada.
Ankadibe – Ambohidratrimo: mpitondra moto maty notrongisin’ny taxi-be
Nandriaka ny ra! Nitrangana lozam-piarakodia namoizana ain’olona indray teny Ambohidratrimo, omaly. Maty tsy tra-drano ilay raim-pianakaviana nitondra moto nofaohin’ny taxi-be voalaza fa nanana olana teknika.Maty tsy tra-drano ny mpitondra moto iray notrongisin’ny taxi-be mihazo an’i Mahitsy, omaly tolakandro tamin’ny 2 ora sy 30 mn teny Ankadibe, Ambohidratrimo. Olana teknika tao amin’ila taxi-be no voalaza fa antony nahatonga izao loza mahatsiravina izao. Naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha tao amin’ilay taxi-be ka nentina haingana teny amin’ny hopitaly. Tsy vitan’izay fa mbola nifatratra tamina fiarakely iray hafa koa ity fiara fitateram-bahoaka ity. Raha ny fanazavan’ny mpandeha iray tao amin’ity taxi-be ity, tany amin’ny Digue no efa nanana olana ity fiara ity, saingy mbola nentin’ny mpamily ihany kanjo izao namoa-doza izao ny fiara. Tampoka tokoa ity loza ity satria ilay taxi-be nidina amin’iny Ankadibe Ambohidratrimo iny no tsy voafehin’ny mpamily intsony ilay fiara ka nifatratra tamin’ilay mpitondra moto hiakatra. Potika tanteraka ny lohan’ilay fiara fitateram-bahoaka raha tafatsofoka tao amin’ny lohan’ny fiara mihitsy ny moto nentin’ilay raim-pianakaviana niharam-boina. Nisy tamin’ireo mpandeha tao anaty fiara no folaka, tao ny tapa-tanana, nisy ireo voa teo amin’ny lohany noho ny dona mafy nahazo ity fiara fitateram-bahoaka ity. Tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana momba ity loza ity ny zandary. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany satria tampoka ny fiavian’ny loza. Ny eo anivon’ny foibe fitsarana fiarakodia rahateo, efa nanafatrafatra ireo mpamily sy ny tompona fiarakodia amin’ny tokony hanatsarana hatrany ireny fiara fitateram-bahoaka ireny hisorohana ny loza toy izao.J.CL’article Ankadibe – Ambohidratrimo: mpitondra moto maty notrongisin’ny taxi-be a été récupéré chez Newsmada.
Kaomandin’ny ACMIL Antsirabe: nandray ny toerany ny Jly Pikulas Démosthène
“Manofana manamboninahitra vonona hiatrika ny ambana rehetra sy ny zavatra takin’ny firenena ny Akademia Miaramila (Acmil) Antsirabe. Tanjona ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana mba ho mpianatra manana ny maha izy azy tokoa no hivoaka avy ao amin’ny Acmil”, hoy ny kaomandy vaovao ny Acmil, ny Jly Pikulas Démosthène, nandritra ny famindram-pibaikoana teo amin’ny kaomandy teo aloha, ny Jly Ramanakavana Henri José tao Antsirabe. Nanentana ireo rehetra maniry hiditra ho mpianatra manamboninahitra ny kaomandy vaovao mba hanana fahavononana sahady sy hanana ny fahaiza-manao rehetra ary ho salamana tsara na ara-batana na ara-tsaina hahafahana miatrika ny fifaninanana hiditra ho mpianatra manamboninahitra. Nitarika ny lanonana tany an-toerana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard sy ny lehiben’ireo Etamazaoron’ny Tafika, ny Jly Sahivelo Delphin. Nanantitrantitra ny minisitry ny Fiarovana fa hitondra fanovana sy rivo-baovao amin’ny fampianarana eo amin’ity toerana fanofanana ho manamboninahitry ny Tafika ity izao fanendrena vaovao izao. Mialoha ny lanonana, nisy ny fanompoam-pivavahana ho fangataham-pitahiana sy fisaorana an’Andriamanitra.Jean Claude L’article Kaomandin’ny ACMIL Antsirabe: nandray ny toerany ny Jly Pikulas Démosthène a été récupéré chez Newsmada.
Fifampitokisana mila fahatokisan-tena
Tsy fifampitokisan’ireo mpisehatra amin’ny fifidianana no lazain’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM) no anisan’ny mahatonga ny olana aloha na mandritra na aorian’ny fifidianana. Aiza na inona no tena fototra sy fositra amin’izany? Ahina lava ny mety hisian’ny korontana.Ny tsy fanajana sy fampiharana amin’ny antsipiriany sy manontolo ny lalàna ve, ohatra, no mahatonga ny fifampiahiahiana lava? Misy ny mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna, mibahan-toerana loatra ny kajikajy sy paipaika politika ka voahosihosy ho azy ny lalàna… Eo koa ny rafitra, ny fomba fiasa…Tsy vitan’izay, ao ny tsy matoky tena amin’izay lazainy sy ataony, hany ka miahiahy hatrany ny hafa ho antony tsy fahombiazan’ny tena? Na tsy mahalala ny momba aza izy amin’izany, fa mitsapatsapa fotsiny ka mitsarapaka any amin’ny fahavoazana. Dia ny hafa no omen-tsiny, ialana vonkona…Atao ahoana, ohatra, ny handresen-dahatra ny hafa amin’ny fifidianana, raha ny tena aza tsy resy lahatra amin’izay lazaina sy atao? Iray tarika amin’izany ny matokitoky tena fahatany na mitompo teny fantatra fa tsy maintsy ho voafidy. Nefa na herin’ny tena aza, ohatra, tsy fantatra mazava.Ekena, mety manao ny ataony tokoa ny hafa: ady fiady ny fifidianana. Mety eo koa ny lalàna, ny rafitra, ny fomba fiasa… Na izany aza, miankina amin’ny fahatokisan-tena marim-pototra eo amin’ny tsirairay no anisan’ny manorina ny fifampitokisana amin’izay atao. Izay matoky tena no azo itokisana?Amin’izany, atao izay lazaina ary lazaina izay atao. Dia mifanara-maso sy mifampiteny: iza no manao inona, iza no tsy manatanteraka? Hampiharina ny lalàna amin’izany raha ilaina, na iza izy na iza manao ny tsy mety. Tsy misy henamaso na tahotra, na fangatahana andro. Ho vita ve izany?Izay ilay hoe miankina amin’ny tsirairay miaraka amin’ny fampiharan-dalàna, hisian’ny fangaraharana fa tsy hifampitahana an-toerana. Hisy fahatapahan-kevitra, fahasahiana, fahavononana, fijoroana…? Ny tena na ny tsirairay no antony, fa ny atao ihany no mampikorontana na tsia?Rafaly Nd.L’article Fifampitokisana mila fahatokisan-tena a été récupéré chez Newsmada.